ပခုက္ကူတွင် ဆောက်လက်စ လုပ်ငန်းခွင်၌ မြေစာပုံ ပြိုကျ အောက်ဆီဂျင် ပြတ်မှုကြောင့် လုပ်သားနှစ်ဥ?? - Yangon Media Group
ပခုက္ကူတွင် ဆောက်လက်စ လုပ်ငန်းခွင်၌ မြေစာပုံ ပြိုကျ အောက်ဆီဂျင် ပြတ်မှုကြောင့် လုပ်သားနှစ်ဥ??
ဆောက်လက်စလုပ်ငန်းခွင်အတွင်း မြေစာပုံ ပြိုကျခဲ့ရာ လုပ်သားနှစ်ဦးမြေပိ ပြီး အောက်ဆီဂျင်ပြတ် သေဆုံးမှု ပခုက္ကူမြို့တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ပခုက္ကူ မြို့ အမှတ် (၁၅) ရပ်ကွက် မြို့ရှောင်လမ်းရှိ ကျော်ဟိုတယ်ဆောက်လုပ် ရေးနှင့် မင်္ဂလာခန်းမလုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ဇွန် ၁၆ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီခွဲခန့်က အဆောက်အအုံ ထပ်မံတိုးချဲ့ရန် မြေကျင်းထဲအလုပ်လုပ် နေစဉ် အမြင့်ကိုးပေခန့်ရှိ မြေစာပုံပြိုကျခဲ့ရာ အောက်တွင်ရှိနေသည့်လုပ်သားနှစ်ဦး မြေပိမိခဲ့ ကြောင်း ပခုက္ကူမြို့မရဲစခန်းမှ ရဲ အရာရှိတစ်ဦးက ဒီမိုကရေစီတူ ဒေးသို့ ဇွန် ၁၆ ရက်က ပြောသည်။
မြေစာပုံ ပိနေသူနှစ်ဦးအား မီးသတ်တပ်ဖွဲ့မှ ရှာဖွေကယ်ထုတ်ခဲ့ကာ ရှေးဦးသူနာပြုစုခြင်း၊ အောက်ဆီဂျင်ပေးခြင်းများပြုလုပ်၍ ပခုက္ကူ ပြည်သူ့ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ခဲ့သော် လည်း ဆေးရုံအရောက် ၎င်းတို့ နှစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ သေဆုံးသူနှစ်ဦးမှာ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်နေ အသက် (၄ဝ) နှင့် အသက် (၃ဝ) ခန့်အရွယ်ရှိ အမျိုး သားတို့ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏အမည် နှင့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ကြောင်း ပခုက္ကူ မြို့မရဲစခန်းမှ ရဲအရာရှိတစ်ဦးက ပြောသည်။
”မြေကျင်းတူးထားတဲ့ မြေစာပုံက အပေါ်ကနေပြန်ပြိုကျပြီး ဖြစ်တာပါ။ ကနဦးအလုပ်သမားလို့ပဲသိရသေးတယ်။ သူ့တို့ကို ပုတ်ပြတ် ပေးတာလား၊ လဆိုင်းပေးတာလားဆိုတာ အခုမှ စုံစမ်းစစ်ဆေးမေး မြန်းတုန်းရှိပါသေးတယ်။ နှစ်ဦးစလုံးက ဆေးရုံအရောက်မှာဆုံးတာ။ အောက်ဆီဂျင်ပြတ် သေဆုံးတာ ပေါ့။ မြေစာပိလို့ မွန်းပြီးတော့ အသက်ရှူရပ်ပြီး သေဆုံးတယ်လို့ ယူဆရတယ်။ ပြင်ပဒဏ်ရာမရှိလို့။ ဖြစ်တုန်းကအနားမှာ အလုပ်သမား တွေတော့ရှိတယ်။ မြေပြိုတာတော့ သူတို့နှစ်ဦးပေါ်ကိုပိတာ”ဟု ၎င်းက ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြောသည်။ ယင်းလုပ်သားနှစ်ဦး သေဆုံးမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပခုက္ကူ မြို့မရဲစခန်းမှ သေမှုသေခင်းဖွင့်ပြီး ဓမ္မတာအတိုင်းသေဆုံးခြင်းဟုတ်၊ မဟုတ် စစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။
သတင်းထောက်များ အနေဖြင့် နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေး အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အသွင်တူသော ဝတ်စုံများ ??
လုပ်ငန်းခွင် စည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက် တစ်ဖက်သတ်ချမှတ်သည် ဟုဆိုကာ စေခိုင်းနေသည့် အတွက် အလုပ်သမ??
တရုတ်နှင့် ရုရှားတို့ကို တန်ပြန်ရန် ဂျပန်စစ်ရေး တိုးမြှင့်
တောမီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့် ကယ်လီဖိုးနီးယားတောင်ပိုင်းမှ အပန်းဖြေပန်းခြံများတွင် ကယ်ဆယ်ေ
ရသေ့တောင်ကမ်းခြေတွင်တွေ့ရှိခဲ့သည့် ဘင်္ဂါလီများတွင်ပါဝင်သော ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသား ၁၂ ဦးအ??
မော်လ်ဒိုက်နိုင်ငံတွင် ဆန္ဒပြ အတိုက်အခံ ၂၅ ဦးကို ဖမ်းဆီး